Moe Kai: July 2013
မနေ.က ကျမ အမျိုးသားက ပြောတယ်။ သူသတင်း စာစောင်တခုမှာ ဖတ်ရတာ မြန်မာ အားကစားသမားတွေ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို. အတွက် လေ့ကျင့်ဖို. စခန်းထိုး Camp လုပ်ရင် အစားတွေ တအားကျွေးတယ်တဲ့။ အဲဒီတော့ အားကစား သမားတွေ လာတုန်းက ခပ်ပိန်ပိန်ရယ်၊ camp က ပြန်သွားရင် ဝတုတ်ကြီးတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်တဲ့။ ဒီသတင်း ကျမကိုယ်တိုင် ဖတ်ရတာ မဟုတ်သလို ဘယ်လောက်မှန်သလဲ ဆိုတာလဲ ကျမမသိပါ။
ကျမတော့ အားကစားသမား Training ကိုလာပြီး ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာတယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်။ ဒီသတင်း တကယ် မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ တခုထဲသော ဖြစ်နိုင်ခြေက အားကစားသမားတွေ လေ့ကျင့်ဖို.လာပေမယ့် သေသေချာချာ လေ့ကျင့်တာ ကစားတာ မလုပ်ကြလို.။ ဒါမှမဟုတ် စားတဲ့ အစားအစာတွေက ကျန်းမာရေးနဲ. မညီညွတ်လို. ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ဆီပြန်စာတွေ အစားများပြီး အစာမကျေနိုင်၊ အဲဒီတော့ Training ကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင် ဆိုတာ မျိုးလိုပေါ့။
ကျမတော့ ဒီက အားကစားပွဲတွေရဲ. Training Camp တွေကို ဆရာဝန် အနေနဲ. လိုက်သွားရတိုင်း ဝိတ်ကျရင်ကျ မကျရင်တောင် ပိုကျန်းမာလာတယ် ဆိုတဲ့ ခံစားချက်နဲ. ပြန်လာရတာ များပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို. ကျွေးတဲ့ အစားအသောက်တွေက အာဟာရနဲ. အလွန် ညီညွတ်တာကိုး။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အသားငါး အသီးအနှံ တကယ် စုံလင်စွာ ပါတာကိုး။ အစားကို လျှော့စားစရာကို မလို။ မနက်စာ၊ နေ.လည်စာ၊ ညနေစာ၊ ညအိပ်ယာမဝင်မှီ အစာ အပြင်၊ ပြိုင်ပွဲ သို.မဟုတ် လေ့ကျင့်ခန်း မသွားမှီ တနပ်၊ တနေ. ၅နပ် စားရတာတောင် ဘယ်သူမှ အလေးချိန် တက်လာတယ်ရယ်လို. မရှိ။ တကယ်ပြောတာပါ ပန်းကန် အမောက် တနေ. ၅နပ်စားရတာ။ အားကစားသမားတွေဆို မောမောနဲ. ၂ပန်းကန် ၃ပန်းကန် စားကြတဲ့ အပြင် သူတို.အတွက် training ပြီးတိုင်း Amino acids နဲ. Carbohydrate တွေ အများကြီးပါတဲ့ Recovery Drinks တွေ သောက်ကြပါသေးတယ်။ မနက်ခင်းတိုင်းလဲ ကျမတို. ကိုယ် အလေးချိန်ချိန်တာ ခန္တာကိုယ် ရေဓါတ် တိုင်းဖို.ဆီးစစ်တာ ((Dehydration) ဆိုတာတွေ လုပ်ရပါတယ်။
သုတေသန သတင်း အချက်အလက်တွေ အရ ဘောလုံးသမား ဘောလုံးပွဲ တပွဲကန်ရင် အင်နာဂျီ ကယ်လိုရီ ၁၅၀၀ လောက် ပျမ်းမျှ ကုန်တယ်တဲ့။ အဲဒီ ကယ်လိုရီ ပမာဏဟာ ကျမတို. မိန်းကလေးတွေမှာ (ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ မလုပ်ပဲ) တနေ.တာ အတွက် လိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီ နဲ. ညီမျှပါတယ်။ ရှင်းရှင်းလေး ပြန်ပြောရရင် ဘောလုံး တပွဲကန်လိုက်တဲ့ အတွက် အင်နာဂျီ ကုန်သွားတာ ပြန်ဖြည့်စီးဖို. ဆိုရင် အနဲဆုံး ကျမတို. မိန်းကလေးတွေ တနေ.တာ စားသောက်တဲ့ အစာ အားလုံးရဲ. ၂ဆ ပြန်စားပေးဖို.လိုအပ် ပါတယ်။ ကဲ အဲဒီတော့ တနေ. အနဲဆုံး ၃ချိန်လောက် လေ့ကျင့်ရတဲ့ (ဘောလုံးပွဲ ၃ပွဲတာလောက်ရှိတဲ့) Training camp မှာ ၁ပတ်လာ နေလိုက်လို. ကိုယ်အလေးချိန်တွေ တက်ပြီး ပြန်သွားရတယ် ဆိုတာ ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မှာလဲ နော်။
တွေးမိတဲ့ အတွေးလေး တခုရယ်ပါ။
ဒီနေ. အိမ်က အဖေ အမေဆီကို ဖုန်းဆက်တာ လိုင်းက အသံ မကြည်လင်၊ ပြောလို.ကမကောင်း။ အရင် တပတ်က ဆက်တုန်းကလဲ အဲလိုပဲ လိုင်းက ပြုတ်ကျကျသွားတာနဲ. သေသေချာချာ စကားမပြောလိုက်ရ။
ဒီပြဿနာက ကျမ ဒီအင်္ဂလန်ရောက်ပြီးထဲက တွေ.ကြုံရတဲ့ ပြဿနာ။ ဒီနိုင်ငံမှာ ဖုန်းလိုင်းယူတော့ ဖုန်းလိုင်းနဲ.အင်တာနက် ကုမ္ဗဏီတွေကနေ “နိုင်ငံခြားခေါ်တာ ရှိလား။ ရှိရင် လျှော့ဈေးနဲ. ရအောင်လုပ်ပေးမယ်” ဆိုပြီး မကြာခဏ ကြော်ငြာ ဝင်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ တလ ၁ ပေါင်ပိုပေးရင် အမေရိကကို အလကား ခေါ်လို.ရမယ်။ တလ ၅ပေါင်ပိုပေးထားရင် နိုင်ငံပေါင်း ၇၀ကျော်ကို အလကား ခေါ်လို.ရမယ်၊ တချို.ဆို နုိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ကျော်၊ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ပထမတော့ ကျမလဲ အကြောင်းမသိတော့ အင်းကောင်းတာပေါ့။ အိမ်ကို မကြာခဏ ဖုန်းခေါ်တာ တခါတလေ ၁လ ပေါင် ၂၀၀တောင် ကျော်သွားတတ်သေးတာလေ။ လျှော့ဈေးနဲ. ရမယ်ဆိုတော့ ဝမ်းသာအားရပေါ့။ အဲဒါနဲ. အရောင်းကောင်တာက လူကလဲ သူ ရောင်းရတော့မယ်ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ အိမ်က ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲ မေးပါရော။ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတော့ သူ.ခင်ဗျာ အချိန်အတော် ကြာကြာ ခေါင်းကုတ် ရှာဖွေပြီးနောက် ... “ဆောရီးပါ မြန်မာနိုင်ငံတော့ ဒီလို လျှော့ပေးလို.ရတဲ့ နိုင်ငံတွေအထဲ မပါပါဘူး” ဆိုတဲ့ အဖြေကိုကြားရတာပါဘဲ။
ဒီလိုနဲ. မကြာခဏဆိုသလို ကြော်ငြာတတ်ကြတာ၊ ၁ခါက ၂ခါ၊ ၃ခါ ထပ်လာတော့ ကျမလဲ အရေထူလာပြီပေါ့။ နောက် သူတို. ကြော်ငြာဝင်ရင် “ငါတို. နိုင်ငံက သူမတူ၊ ထူးခြားတဲ့ နိုင်ငံ၊ နင်တိုဘာသာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ မက ၃၀၀ဖြစ်ဖြစ် တကမ္ဘာလုံးပဲ လျှော့ဈေးပေးပေး တို.နိုင်ငံတော့ ပါမှာ မဟုတ်လို.” ပြောပြရတော့တယ်။ နှစ်တွေကြာလာတော့ တခါတလေတော့လဲ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာ မလား စုံစမ်းကြည့်ပေမယ် ထူးမခြားနား။
ဒီမှာ သိကြွမ်းတဲ့ နိုင်ငံတကာက သူငယ်ချင်းတွေကလဲ ကျမရဲ. ဖုန်းခေါ်ရတာ ဈေးကြီးတာ၊ ခေါ်ရခက်တာ ညည်းသံကြားတော့ ဘယ် ဖုန်းကဒ်၊ ဘယ်လိုင်းဆို ဈေးအလွန်သက်သာတာ။ ဥပမာ အိန္ဒိယ၊ အီရပ်၊ သီရိလင်္ကာ၊ တရုပ် အားလုံး ဖုန်းခေါ်ရင် ၁မိနစ်ကို ၁ပြားပဲပေးရတာ။ ခေါ်ကြည့် ပြောပြကြပေမယ့်၊ ကျမသိသလောက် မြန်မာကို ခေါ်ဖို.ဈေးအချိုဆုံး ရနိုင်တာကတော့ ပြား၂၀ထပ် မနဲ။ ဒါတောင် ဖုန်းလိုင်းက ကြည်တာမဟုတ်၊ မကြာခဏ လိုင်းပြတ်ကျတဲ့ ရောဂါက ရှိသေး။
စကားမစပ် မြန်မာနိုင်ငံက မိုဘိုင်းတွေ အကြောင်းလဲ တွေးမိသေးပြန်ပါတယ်။ ဒီ အင်္ဂလန် ရောက်ရောက်ချင်း အလုပ် မရသေးခင် ဖုန်းလိုတယ်ဆိုပြီး အမျိုးသားက မိုဘိုင်းဖုန်း ၁လုံးဝယ်ပေးပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ပေါင် ၂၀ ကျော်လေးပဲ ပေးရတယ်။ SIM ကဒ်က အလကား ရပါတယ်။ ဖုန်းဆိုင်တွေက ရောင်းချင်လွန်းလို.လေ။ ကျမ ရန်ကုန်မှာ နေတဲ့ အချိန်တုန်းက မိုဘိုင်းဆိုတာ လူတိုင်း မကိုင်နိင်။ SIM ကဒ်က အစိုးရဆီက မှောင်ခိုနဲ.မဟုတ်တရုတ် ပေါက်ဈေးနဲ.ဝယ်ရတာ။ အဲဒီတော့ ဖုန်းကိုင်နိုင်သူတွေက မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို အဆောင်အယောင်တခုလို ရှိုးပြစရာ တခုလို ခါးကြားမှာ ချိတ်ထားတတ်ကြတာ ဒီမှာ ပြောပြတော့ အပေါင်းအသင်း အားလုံးက တအံ့တသြ။
ဒါတင် ဘယ်ကဦးမလဲ။ Gmail တို. Gtalk တို.ကို တရားမဝင်ဘူး ပြောပြီး ပိတ်ထားခဲ့တာလဲ တို.နိုင်ငံ။ Viper လို အင်တာနက်ကနေ ဖုန်းပြောလို.ရတဲ့ applications တွေကို တရားမဝင်ဘူး ဆိုပြီးပြောတာလဲ တို. မြန်မာနိုင်ငံပါပဲ။ မြောက်ကိုးရီးယားတို အီသီယိုးပီးယားတိုတောင် အဲလို အခြေအနေမျိုး ကြုံဖူးမယ်မထင်။
အဲ မဆီမဆိုင် ထဲ့ပြောရရင် ကျမတို.နိုင်ငံရဲ. လတ်တလော တိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှုနဲ.အတူ အခု မြန်မာ အစိုးရ အဖွဲ.အစည်းတွေမှာလဲ ခေတ်မှီစွာ အင်တာနက် သုံးလာကြပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ ရှိလာကြပါပြီ။ ဥပမာ ကျမတို. ဆေးကျောင်းရဲ. ကိုယ်ပိုင် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်က အစပေ့ါ။ တော်တော်ကြီး ခေတ်မှီလာပြီပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ဒီအစိုးရ ရုံးတွေရဲ. ဆက်သွယ်စရာ အီးမေးလ်ကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ Gmail accounts တွေ ဖြစ်နေတတ်တာ များပါတယ်။ အသိတယောက် မကြာသေးခင်က အလုပ်အတွက် ဆေးကျောင်းက စာလိုတော့၊ တောင်းတဲ့သူကို ငါတို.ဆေးကျောင်းကို တိုက်ရိုက် စာရေး၊ ဒါမှမဟုတ် အီးမေးပို.တောင်းလိုက်ပေါ့ ဆိုတော့ တောင်းတဲ့သူတွေက Gmail နဲ. အီးမေး လိပ်စာကိုကြည့်ပြီး အဲဒါ တကယ့် တရားဝင် အီးမေးဆိုတာ မယုံ။ ကျမ အသိက နာမည်တုနဲ. ဝင်ဖွင့်ထားတယ်လို. ထင်ပြီး စွပ်စွဲနေသေးတာ။
ကဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပြီးတော့မှာ မဟုတ်၊ အခုတော့ ညဉ်.နက်လာပြီမို. ညည်းတာတွေကိုရပ်ပြီး ည အိပ်ယာဝင်ရပါတော့မယ်။ အားလုံး အိပ်မက် လှလှ မက်ကြပါစေ ........
တနေ.ကပေါ့ ကျမလုပ်တဲ့ ဆေးရုံမှာ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်လေးတွေ သွားကြည့်မိတယ်။ အားကစားမှာလဲ မသန်စွမ်းသူများက ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ. ကစားနည်းမျိုးစုံ ကစားတာရှိတော့ သူတို. သုံးတဲ့ ကုလားထိုင်တွေ ကျမလဲ နားလည်ထားအောင် သွားလေ့လာတဲ့ သဘောပါ။ အဲဒီမှာ သဘောကောင်းတဲ့ ဆရာကြီးတယောက်က ဒါဆိုလဲ ဘီးတပ်ကုလားထိုင် တခုလောက် ယူပြီး ဆေးရုံဘေးပတ်ဝန်းကျင် လျှောက်မောင်းကြည့်ပါလားတဲ့။ အဲဒီတော့ ကျမ တွေးမိတာ ဘီးတပ် လက်တွန်းလှဲ ဆိုရင်တော့ ကျမ လက်မောင်းက အဲလောက် သန်တာမဟုတ်။ ပင်ပန်းရော့မယ်။ လျှပ်စစ်နဲ. လုပ်တဲ့ ကုလားထိုင်လေးတွေ ဆိုရင်တော့ လက်ညှိုး လက်မ ၂ ချောင်းထဲနဲ. မောင်းလိုရတော့ စမ်းကြည့်တာပေါ့ ဆိုပြီး ကျမနဲ. အသိ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ကောင်မလေးတယောက်နဲ. အတူ ဆေးရုံ အပြင်ဘက်ကို လျှပ်စစ် ဘီးတပ် ကုလားထိုင် တယောက်တလုံးနဲ. ထွက်ဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ်။
စမောင်းခါစဆိုတော့ ဟိုယိုင်ယိုင် ဒီယိုင်ယိုင်၊ ဟိုတိုးလိုက် ဒီတိုးလိုက်။ လမ်းမှာတွေ.တဲ့ လမ်းသွားလမ်းလာတွေတော့ ကျမတို.ကို ကြည့်ပြီး မသန်မစွန်းသူ ကောင်မလေးတွေ တကယ်ထင်ပြီး တချို.လဲ သနားတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေနဲ.။ တချို.လဲ သေသေချာချာ လမ်းဖယ်ပေးကြ။ တချို.ကလဲ အားပေးတဲ့ အပြုံးလေးတွေ ပြုံးပြသွားသေး။ တချို.ကတော့ ကျမတို.လမ်းကျဉ်းလေးကို မရမက ဖြတ်နေတော့ ဘာကူပေးရမလဲ အဆင်ပြေရဲ.လား ဆိုပြီး ဖေါ်ရွှေတဲ့ အပြုံးတွေနဲ. လာကူပေးကြ ပြန်ပါတယ်။ လမ်းကူးတော့လဲ ကားတွေက ကျမတို. လမ်းဖြတ်ပြီးတဲ့ အထိ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ. စောင့်ပေးကြပါတယ်။ တချို.ဆို လက်တောင် ပြသွားလိုက်သေး။
ကျမတော့ စိတ်ထဲ တမျိုးချည်း ဖြစ်မိတာ အမှန်။ ဘယ်လို ပြန်ပြောရမယ် မပြောတတ်။ တခါတလေ လမ်းဖြတ်ကူးရမယ်ဆိုရင် စိတ်ထဲ ကြောက်တာ စိုးရိမ်တာမျိုး ဖြစ်မိသလို၊ လမ်းက မညီညာ အဖုအထစ်တွေ များနေရင် ငါဖြတ်လိုရပါ့မလား ပူပန်မိတာလဲ မကြာခဏပါ။ ဘေးကလူတွေရဲ. ဂရုဏာ အပြုံးတွေကို ကြည့်ပြီးတော့လဲ တကယ် မသန်းစွမ်းသူတွေ ဘယ်လိုများ ခံစားရမလဲ တွေးမိတာ အမှန်။
ဒီမှာ ဒုက္ခတွေ.စရာက ပေါ်လာသေး။ ကျမရဲ. ဘီးတပ်ကုလားထိုင် ဘီးက မြေနိမ့်ထဲ ကျွန်ကျပြီး ပြန်ရုန်းလို မရတော့။ ကားဘီး နွံနှစ်သလို ဘီးက တဝှီဝှီလယ်ပြီး ကုလားထိုင်က မရွေ.။ ကျမလဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ အဲဒီအချိန်မှ ခပ်တည်တည်နဲ. ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်က ထပြီး ကုလားထိုင်မရွှေ.ရင်လဲ ဘေးကလူတွေ၊ စောစောက ဂရုဏာ အပြုံးနဲ.လူတွေ၊ တွေ.သွားရင် ကျမကို ဒုက္ခသည် ယောင်ဆောင်သူဆိုပြီး ကလော်ဆဲတော့မယ်။ ထမရ ပြုမရ၊ ဘီးကလဲ မရွေ. ကျမ တော်တော် ချွေးပြန်သွားခဲ့ရပါတယ်။ တော်ပါသေးတယ်။ လမ်းဟို တဘက်ချမ်းက လူတယောက်က လာပြီး တွန်းမပြီး လမ်းပေါ်ပြန်တင်ပေးလို. ပြန်ဆက်သွားလို.ရသွားပါတယ်။ တကယ် မသန်စွမ်းသူသာဆိုရင် ဘယ်လောက်တောင်များ စိုးရိမ် ကြောက်စိတ်ဝင်သွားမလဲနော်။
အဲဒီလိုနဲ. ၁နာရီနီးနီး ကျမတို ၂ယောက် တွေ.ရာ လမ်းလျှောက်မောင်းပြီး ဆေးရုံထဲ အဆင်ပြေစွာ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ ကဲ ဘာ အထစ်အငေါ့မှ မရှိ။ လူကလဲ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ နဲနဲ ရဲလာပြီ။ အားလုံးလဲ ပြီးပြီဆိုတဲ့ စိတ်နဲ. ဆေးရုံ ရှေ.တဲ့တဲ့ ပလက်ဖေါင်းပေါ် ကျမ အရှိန်နဲ. တက်လိုက်တာ ပလက်ဖေါင်းက နဲနဲ မြင့်ပြီး အဖုဖြစ်နေတော့ ကုလားထိုင်က ဝုန်းကနဲ ဆောင့်ခုန်လိုက်တာ ကျမလဲ အုန်းကနဲ ကုလားထိုင်ပေါ်က မြောက်တက်ပြီး လမ်းမပေါ် ဖင်နဲ ပြုတ်ကျပါရော။ ဆေးရုံရှေ.တဲ့တဲ့ လူနာတင်ယဉ်တွေ ရပ်ထားတဲ့နေရာ။ Paramedics လို.ခေါ်တဲ့ ရှေးဦးပြု ကုသတဲ့ သူတွေရဲ. ရှေ.တဲ့တဲ့ကို ပြုတ်ကျတာ။ သူတို.က ကျမကို သိနေပြီးသား သူတွေဆိုတော့ တကယ် မသန်စွမ်းသူ မဟုတ်မှန်း သိနေတော့ ရယ်ချင်တဲ့ မျက်နှာတွေနဲ. တခွိခွိ လုပ်ပြီး .. “အဆင်ပြေရဲ.လား၊ ဘယ်နားနာသွားလဲ” လာမေးကြ လာထူပေးကြပါရော။ ကျမလဲ အရှက်ပြေ ရယ်ကျဲကျဲ နဲ. .. “ဟဲဟဲ နာပါဘူး ရပါတယ် ရပါတယ်” ဆိုပြီး .... ကျမရဲ. တနေ.တာ စွန်.စားခန်းလေး ပြီးစီးသွားခဲ့ရပါတယ်။
Rick Heizman's response article to Hannah Beech's Time cover story
This landed in my inbox today.
ကျမ အင်္ဂလန်လာတာ ၂၀၀၅ အကုန်မှာ။ မြန်မာမှာ နေတုန်းက အဲဒီ အချိန်က အင်တာနက်ဆိုတာ သိပ်မသုံးကြသေး။ ကျမ အမျိုးသားက ကျမထက် ၅လစော အင်္ဂလန်ရောက်တာဆိုတော့ သူ.ဆီဆက်သွယ်ချင်ရင် ကျမ ယောက္ခမအိမ်မှာ အင်တာနက် ချိတ်ထားတော့ အဲဒီကနေ အီးမေးပို.ရပါတယ်။ ယောက္ခမရဲ. account ကနေပေါ့။ အဲဒီတော့ အမျိုးသားဆီ ဘယ်လိုလွမ်းကြောင်း ချစ်ကြောင်းတွေတော့ ပြောလို.မရဘူးပေါ့။ ဟီးဟီး။
အဲဒီ အချိန်က အမျိုးသားက ကျမကို ကိုယ်ပိုင် အီးမေး အကောင့် ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ ကျမက “ပိုက်ဆံကုန်တယ် မလုပ်နဲ.”လို. ပြောမိသေးတယ်။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဖွင့်ရတယ် အောက်မေ့လို.လေ။ အမျိုးသားက မဟုတ်ဘူး အလကား ဖွင့်ရတာဆိုတော့ ဝမ်းသာအားရ အဲဒါဆိုရင် ဖွင့်ပါဦးပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ gmail, hotmail ဆိုတာတွေ ပိတ်ထားတော့ ကျမကိုယ်တိုင်တော့ သုံးလို. မရ။ ဒါပေမယ့် သုံးလို. ရတာ မရတာက အကြောင်း မဟုတ်။ ကိုယ်နာမည်နဲ. အီမေးအကောင့် ရှိတယ်ဆိုတာနဲတင် ကျမမှာ ဝမ်းသာလုံး ဆို.နေပြီ ကျမအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ တခု။
ဒါနဲ. ကျမ အင်္ဂလန်ရောက်လာတော့ အင်တာနက် အီးမေး အလကား သုံးရပါပြီ ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ ရှိရှိသမျှ အီးမေးတွေ လိုက်ဖွင့်တာ Gmail, hotmail, yahoomail စုံလို.။ တချို.ဆို နာမည် ၂မျိုး account ၂ခု ၃ခုတောင့် ဖွင့်လိုက်သေး ဟီးဟီး။ နောက်မှ accounts တွေ များပြီး လိုက်စစ်ရတာ အချိန်ကုန်လွန်းလို. passwords တွေလဲ မေ့လိုမေ့။ ကိုယ့်ကိုတောင် ဟက်လုပ်တာ ခံရသေး။ ဒါနဲ. နောက်မှ account တစ်ခုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးဖြစ်သွားတာ ဆိုပါတော့။
အဲဒီ ရောက်ခါစ အချိန်တုန်းကတော့ ဆေးရုံက အိမ်မှာ ငှားနေတုန်း။ အိမ်မှာ ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက် သုံးလို.မရသေး။ ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်ပြီးရင် ညနေဆိုရင် လိုင်ဘရီကိုသွား လာသမျှ အီးမေးစစ် ပြန်စရာရှိတာပြန် အိမ်ကို အီးမေးပို.ဆိုတာတွေ လုပ်ရပါတယ်။ အလုပ်တွေကလဲ လျှောက်ထားချိန်ဆိုတော့ ညနေဆို ရင်ခုန်စွာ ဘာသတင်းထူး များရှိမလဲ လို အပြေးအလွှား သွားပြီး အီမေးစစ်ရတာ။ ဘာအလုပ်တွေ ထွက်လဲ အင်တာနက်မှာ သွားရှာရတာ။ ဆေးရုံ လိုင်ဘရီမှာ သုံးရတာဆိုတော့ website တော်တော်များများကိုတော့ သုံးမရအောင် ပိတ်ထားသေးတာပေါ့။
အဲဒီအချိန် ကျမ သုံးတဲ့ ဖုန်းကလေးကလဲ motorola သေးသေးပြားပြားလေး။ ဖုန်ခေါ်တာနဲ. text ပို.တာ ၂ခုပဲ သုံးလို.ရတယ်။
ဒီလိုနဲ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၈ထိ isle of man မှာ အလုပ်လုပ်တော့ အိမ်မှာ အင်တာနက် သုံးလို.တော့ ရသွားပါတယ်။ ဆေးရုံကအိမ် ဆေးရုံက အင်တာနက်လိုင်း ဆိုတော့ အင်တာနက်ကတော့ နဲနဲတော့ နှေးပါတယ်။ အလုပ်က ပြန်ရောက်မှ ညနေခင်းတွေဆို အိမ် သူငယ်ချင်းတွေဆီကို အီးမေးပို.တာ လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုရီးယားကားတွေ Youtube ကနေ. ကြည့်ပြီးတော့လဲ မြန်မာပြည်ကို အလွမ်းဖြေရတာ အမော။
၂၀၀၈ခုနှစ် Liverpool ပြောင်းတဲ့ အချိန်ကြတော့ အိမ်မှာ အင်တာနက် ဆက်ဖို. ၃ပတ်လောက် စောင့်ရမယ်တဲ့။ ဒါနဲ. အဲဒီ အချိန်မှာ iphone တွေ ပေါ်ခါစ၊ ဖုန်းနဲ. အင်တာနက် သုံးလို.ရတယ်။ အီးမေး စစ်လို.ရတယ်တဲ့။ ကဲ လမ်းသွားရင်း အလုပ်လုပ်ရင်း ... အချိန်ပြည့် အီးမေးစစ်လိုရမယ်တဲ့၊ အဲဒီအချိန်က ကျမလဲ မယုံတဝက် ယုံတဝက် နဲ. ကဲသုံးကြည့်တာပေါ့ဆိုပြီး အဲဒီအချိန်ကစပြီး iphone သုံးလိုက်တာ အခု အထိပဲ ဆိုပါတော့။ အခုတော့ ကျမရဲ. ဖုန်းဟာ ကျမနေ.စဉ် လုပ်နေကျ အလုပ်တွေအတွက် တကယ့် မဖြစ်မနေ အရေးပါတဲ့ အရာ တခုဖြစ်လာပါတယ်။
ကျမအလုပ်အတွက် အီးမေးဆိုတာကလဲ အလွန် အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ တခုမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စ အားကစား သမားတွေရဲ. ဒါဏ်ရာ ကျန်းမာရေး ဆိုတာတွေ အီးမေးနဲ.နေ.စဉ် ဆွေးနွေးရပါတယ်။ အခုတော့ အလုပ်ထဲမှာ နဲနဲ အားပြီး ဆိုတာနဲ. ဖုန်းနဲ.ပဲ အီးမေးစစ်တာ ပြန်တာ လုပ်လိုက်တော့ အရင်ကလို ညနေ ဆေးရုံအလုပ် ပြီးတဲ့အထိ စောင့်စရာ မလိုတော့။ အလုပ်ကိစ္စတွေလဲ မနှောင့်နှေးတော့။ ကျမအတွက် ညနေခင်းကလဲ အားတဲ့ အချိန် ပိုများလာတာပေါ့လေ။ အားရင် အားသလို အလုပ်မှာ ပျင်းနေရင် facebook လို twitter လိုတောင် ဝင်စပ်စုတာတွေ မကြာခဏ လုပ်ဖြစ်လိုက်သေး။
အခုတော့ iphone တင်မက ipad, tablets တွေ အပြင် .... ပို မြန်တဲ့ 4G network, ကိုယ်နဲမကွာ ယူသွားလို.ရတဲ. personal wifi hotspot .... Fibre optic broadband အစရှိသဖြင့် အသစ် အသစ်တွေ ပေါ်လာတာ တခါတလေများ လိုက်လို.တောင်မမှီ။ နောင် ဘာများ ထပ်ပေါ်မလဲ ကျမတို.ရဲ. နေစဉ်ဘဝကို ဘယ်လို သက်ရောက်မှုရှိဦးမလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီး အခုတော့ ကျမရဲ. ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်ဘက် ပြန်ဆက်လိုက်ပါဦးမယ်။
ဒီရက်ပိုင်း Jude Law ရဲ. Side effect ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပထမတော့ ပျင်းလို. အမျိုးသားနဲ. ဘာရယ်မဟုတ် ထိုင်ကြည့်ဖြစ်တာ။ ဆရာဝန်ကားဖြစ်တော့ ပိုစိတ်ပါဝင်စားစွာ ကြည့်မိတယ်။
Jude Law က စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်။ အလွန်တော် အောင်မြင်တဲ့ ဆရာဝန်ကောင်း တယောက်။ မင်းသမီး (Rooney Mara) က စိတ်ဓါတ်ကျ ရောဂါ ခံစားနေသူ။ သုံးနေကျ ဆေးတွေနဲ. မသက်သာတော့ ဆေးအသစ်ကို သုံးကြည့်တယ်။ အဲဒီ ဆေးအသစ်ကြောင့် မင်သမီးက Sleep Walking (အိပ်နေရင်း လမ်းထလျှောက်တာမျိုး) နဲ. သူ.အမျိုးသားကို သတ်လိုက်ပါရော။ အဲဒီမှာ မင်းသားက အလွန်အောင်မြင်တဲ့ ဆရာဝန်ဘဝကနေ စစ်ဆေးခံရတာ၊ တရားရုံးတက်ရတာ (expert witness အနေနဲ.ပါ) အလုပ်ပြုတ်တာ .... ဆိုတဲ့ ဂရက်ပေါင်းများစွာ သူ.ကိုရိုက်လာပါရော ..
ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တော့ ကျမတို. လင်မယားအတွက်တော့ အတော် ကြည့်ကောင်းတဲ့ ကားပါ။ သံဝေဂ ရစရာ လူနာတွေနဲ. အထူး ဂရုထားစရာ သင်္ခန်စာတွေလဲ ရစေပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဆိုတော့ နောက်ဆုံးတော့ လှဲ.ကွက်လေးနဲ.ပေါ့လေ။ ဒါကိုတော့ ထဲ့မရေးတော့ဘူး။ Thriller/ Drama စိတ်ဝင်စားရင် ကြည့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကျမ လက်ထောက်ဆရာဝန် ဘဝတုန်းက (Foundation Year 2) စိတ်ရောဂါဋ္ဌာန မှာ ၄လ အလုပ် လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ တွေ.တဲ့ ဆရာဝန်မကြီး တယောက်ပြောဖူးတာ ကျမလုံးဝ မမေ့။ သူရဲ. လူနာတယောက် Manic Depressive disorder နဲ. စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံမှာ တက်နေတာ ၆လကျော်။ လူနာလဲ အတော်သက်သာလာပြီဆိုပါတော့။ တသက်လုံး လူနာကို ဆေးရုံမှာ တင်ထားလို.မရ။ လူနာကလဲ အိမ်ပြန်ချင်ဆိုတော့ ၂ရက် အိမ်ခဏ ပြန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လူနာဟာ Liverpool ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ပြီး သူအားပေးတဲ့ အသင်းရှုံးတော့ စိတ်တို စိတ်ဖောက်လာပြီး ဘေးမှာရှိတဲ့ လူကို ဓါးနဲ. ထိုးလိုက်တာ ပွဲချင်းပြီး သေပါရောတဲ့။ ကျမအသိ ဆရာဝန်မတော့ အဲဒီက စပြီး စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး ဆိုပြီး အရက်စွဲတဲ့ လူတွေကို ပဲကုတဲ့ဘက်ကို ပြောင်းလိုက်တယ်တဲ့။
ဘာရယ်မဟုတ် ပြန်တွေးဖြစ်တာလေးပါ။ ကိုယ့်ကြောင့် တိုက်ရိုက်မဟုတ်လဲ သွယ်ဝိုက်တဲ့ နည်းနဲ. လူတယောက်သေသွားရတာလား။ တရားဥပဒေအရ အရေးယူစရာ မရှိတောင်မှာ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ တသက်လုံး နောင်တတွေရနေစေမလား။